၃၅ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ဖြူးမြို့တွင် အမြင့်ဆုံးအပူချိန် စံချိန်သစ်တင် - Yangon Media Group
၃၅ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ဖြူးမြို့တွင် အမြင့်ဆုံးအပူချိန် စံချိန်သစ်တင်
ဖြူးမြို့တွင် ၃၅ နှစ်တာကာလအတွင်း အမြင့်ဆုံးအပူ ချိန် စံချိန်အသစ်မှာ ၄ဝ ဒသမ ၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း မိုး လေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ မတ် ၂၄ ရက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ ယခင်အမြင့်ဆုံး စံချိန်တင်ခဲ့သည့်နှစ်မှာ ၁၉၈၅ ခုနှစ် မတ် ၉ ရက်ဖြစ် ပြီး အပူချိန် ၄ဝ ဒသမ ၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်မိုးဦးက ”ဖြူးမှာ စခန်းစတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့ ၃၅ နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ စံချိန်အသစ် တင်သွားတာပါ။ ယခင်အမြင့်ဆုံး စံချိန်က ၄ဝ ဒသမ ၁ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ဖြစ်ပါတယ်။ အခုနှစ်မှာတော့ အပူချိန်စံချိန်အသစ် ၄ဝ ဒသမ ၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ရောက်ရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို သတိပြုသင့်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ယခုနှစ်နွေရာသီတွင် အပူချိန် စံချိန်အသစ်တင်သည့် ဒေသများမှာ ဖြူးနှင့် ရေးမြို့စခန်းများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖြူးမြို့မှ ဒေသခံတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဝင်းလှိုင်က ”ဒီနှစ်ကတော့ တော်တော်လေး ပူတာကို တွေ့ရတယ်။ အရင်နှစ်တွေကထက်ကို ပူတယ်။ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲဖြေပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းကစပြီး ပူတာပါ။ အပူဟပ်နေသလိုပဲ။ ပူတာကတော့ မိုးချုပ်တဲ့ အထိကို ပူနေတာ။ အပူလှိုင်းဟပ်နေသလိုဖြစ်နေတာပါ”ဟု ပြောသည်။
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ မတ် ၂၂ ရက် သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရေးမြို့၏ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာလည်း ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် မတ် ၂၇ ရက်တွင် အပူချိန် ၃၉ ဒသမ ၂ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ရှိခဲ့ပြီး၂ဝ၁၉ ခုနှစ် မတ် ၂၂ ရက်တွင် အမြင့်ဆုံးအပူချိန် ၃၉ ဒသမ ၄ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယာဉ်တန်းနှင့် အပြိုင်မောင်းသူကို တရားစွဲဆိုမည်
Twilight ဇာတ်ကားထဲမှ မင်းသမီး အက်ရ်ှလေဂရင်းန် လက်ထပ်လိုက်ပြီ
မြို့ချောင်း အမြန်လမ်းတွင် ကန်တာယာဉ်မှ အရှိန် မထိန်းနိုင်ဘဲ ကလူဂါယာဉ်အား ဝင်ရောက် တိုက်မိ??
အုပ်စုကျပ် အတွင်း ကျရောက်နေသော်လည်း ဂျိုရူး လက်မလျှော့
မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံခါးပတ်ကာကွယ်ပွဲ ထိုးသတ်မည့် အောင်လအန်ဆန်နှင့် လျှပ်တစ်ပြက်အ??